नक्सामा बाटो खोज्दै गर्दा गुगल म्यापमा देखियो यस्तो, जीवनमा आयो भूकम्प | Rajmarga
नक्सामा बाटो खोज्दै गर्दा गुगल म्यापमा देखियो यस्तो, जीवनमा आयो भूकम्प
पेरुका एक व्यक्ति कहीँ जान खोज्दै थिए तर जाने ठाउँबारे उनलाई राम्रोसँग थाहा थिएन किनकि उनी पहिले त्यहाँ गएका थिएनन् । उनले त्यहाँसम्म जानको लागि गुगल म्यापको सहारा लिए । उनले गुगल म्यापमा हेर्दै गर्दा यस्तो दृश्य देखे जसले उनको जीवनमा भूकम्प आयो ।
दक्षिण अमेरिकी देश पेरुको राजधानी लिमामा रहने ती व्यक्तिले गुगल म्याप हेरेर थाहा पाए कि उनकी पत्नीले उनलाई धोका दिइरहेकी छिन् ।
ती व्यक्ति त्यस दिन गुगल म्यापको सहयोगमा बाटो खोज्ने प्रयास गर्दै थिए । अचानक म्यापमा उनले एक तस्वीर देखे । तस्वीरमा देखिएकी महिलाले हुबहु उनकी पत्नीजस्तै कपडा लगाएकी थिइन् । जब उनले ध्यानपूर्वक हेरे अनि थाहा पाए कि ती महिला उनकी पत्नी नै थिइन् । उननकी पत्नी आफ्ना प्रेमीसँग प्रेमालापमा मस्त थिइन् । त्यसपछि उनी घर गए । उनले पत्नी घर फर्किंदासम्म पर्खिए ।
पत्नी आउनासाथ उनी पत्नीसँग रिसाए । सुरुमा त पत्नीले यो सबै झुटो भएको बताइन् तर जब उनले फोटो देखाए त्यसपछि सबै कुरा स्वीकार गरिन् । यो जोडीको नाम सार्वजनिक भएको छैन । ती व्यक्तिले यो फोटो देखेपछि पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गरे । गुगल स्ट्रीट भ्यू र गुगल म्यापमा भेटिएका फोटोका कारण हंगामा मच्चिएको यो पहिलो घटना भने होइन ।एजेन्सी
Previous post: शल्यक्रियाबाट शिशु जन्माउने प्रवृत्ति किन अधिक ?
Next post: अमित बरालले रुवाए इन्दिरा जोशीलाई, आखिर किन रोइन इन्दिरा धुरुधुरु ? (भिडियो)
विचित्रको जागिरः दुई महिना लगातार सुतेको १६ हजार युरो तलब !
सपनामा यौनसम्बन्धी कस्तो सपना देख्नुको अर्थ के हुन्छ ?
कुन अक्षरको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ? थाहा पाउनुहोस्
पुरुषले लिंगको तस्वीर पठाएपछि महिलाले यस्तो जवाफ दिइन्….
पुरुषका यी पाँच कुराबाट टाढा भाग्छन् महिला, अहिले नै गर्नुहोस् परिवर्तन
अनौठो परम्परा, जहाँ बाबु–छोरीबीच बिहे हुन्छ
सहजरुपमा राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाटै हटाउँछौं : अध्यक्ष प्रचण्ड
आफ्नो गृहजिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र शिलन्यास गर्न गएका अर्थमन्त्री पौडेलमाथि स्थानीयको ढुङ्गामुडा, मन्त्री कार्यक्रम छाडेर हिँडे
काँग्रेसले विद्यमान सङ्कटलाई निकास दिनुपर्छ : नेता सिंह
विप्लव नेतृत्वको नेकपा स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला काभ्रेबाट रिहा